Home WARARKA “Qas hayna gelinina oo cadowga haynoo jebinina” Faysl C Waraabe
Waa inoo guuldarro in ciidankeenii caynkaa ahaa inuu maanta cabanayo,
Hargeysa-(Berberanews)-Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng Faysal Cali-waraabe, ayaa ugu baaqay ciidammada qaranka Somaliland inay ku noqdaan xeryahoodii oo ay iska soo saaraan guddi tabashooda u gudbisa xukuumadda.
Eng Faysal waxa uu wax laga xumaado ku tilmaamay in ciidammada Qaranka Somaliland ee fadhigoodu yahay Gobollada Bari oo shaqo weyn qaranka u haya inay maanta cabasho ka timaado, isagoo sheegay in ciidammadu yihiin meesha qudha ee u fayow Somaliland.
“Maanta waad ogtihiin oo meel qudha oo inoo shaqaynaysaa ma jirto, waad ogtihiin oo maanta wasiirradeena, wasiir qudha ood isleedahay wuu shaqaynayaa kuma jirto, hadii laga reebo wasiirka maaliyadda oo isaga xil weyni saaranyahay oo isgau inuu kharashka keeno ah, oo cashuurta guro mooyaane.
Waxaa inoo fayo qabay ciidammada qaranka, maantana waad ogtihiin ciidammadeena waxaa ka taagan. Taasi waxay ka markhaati kacaysaa inuu dalku mugdi ku jiro. Waxaan farriin u dirayaa ciidammada Somaliland ee difaaca ku jira ee nabada ilaaliya, oo bari oo dhan maamulkeedu ma adka, waxay dadkaasi ku noolyihiin ciidamadeena oo nabada ka shaqeeya islamarkaana cadowga dhirbaaxooyon xun siiya.
Waa inoo guuldarro in ciidankeenii caynkaa ahaa inuu maanta cabanayo, ciidanka waxaan leeyahay ‘sharaf baa leedihiin’ waa laydinku faanaa, waxaan idinka codsanayaa inaad xeryihiinii ku noqotaan, guddi soo dirataan, gudidaas wixii aad ka cabanaysaan u soo dhiibtaan, idinkoo si nidaam leh wixiina u heli kara qas hayna gelinina oo cadowga haynoo jebinina'”
Guddoomiyaha Xisbigu wuxuu baaq u diray Madaxweynaha Somaliland, waxaannu yidhi, “Madaxweynaha waxaan leeyahay ‘ Madaxweyne waa inaad tabashadaa ciidamada si dhakhso ah uga jawaabtaa, isbedela ku samaysaa ciidamada oo waxay ka cabanayaan aad degdeg uga samaysaa”
Faysal calj waraabe
Previous articleHoggaamiye Xirsi oo ku baaqay inaan la siyaasadayn arrimaha ciidanka
Next article“Waxan aaminsanahay dadka Somaaliyed inaanay kala tagi Karin” Pof Buubaa